↑ 2009 Federal Holidays Archived 16 January 2013 at the Wayback Machine. — U.S. Office of Personnel Management. Retrieved November 27, 2009.
↑ How December 25 Became Christmas, Biblical Archaeology Review, Retrieved 2009-12-13။ 18 December 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 December 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခရစ္စမတ်&oldid=677747" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၂၂:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။